Vivo Y30 Moonstone White (4GB/64GB)-19 ~ ICT.com.mm
HomeVivo Y30 Moonstone White (4GB/64GB)-19
Vivo Y30 Moonstone White (4GB/64GB)-19
Display: 6.47 inches Resolution: 720 x 1560 pixel (405 ppi density) CPU: Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) Chipset: Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Memory:4GB (RAM) Internal Storage:... [Learn more]
Brand: VivoSKU: 175726N/ASee more: Mobile Phones, New Arrivals, Products, VivoFilter by: outofstock, Smartphones
Resolution: 720 x 1560 pixel (405 ppi density)
Internal Storage: 64 GB (ROM)
Rear Camera: 13 MP, 8 MP,2MP,2MP
Vivo မှ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Y30 စမတ်ဖုန်းသစ် ဖြစ်ပါတယ်။ အလယ်အလတ်အဆင့် စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 6.47” နဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ IPS LCD Display အမျိုးအစားကို အသုံးပြုထားပြီး Resolution က 720 x 1560 Resolution ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Notch မပါဝင်တဲ့ မျက်နှာပြင်အပြည့်ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုထားပြီး ~266 ppi density ရရှိတဲ့အတွက် တောက်ပကြည်လင်တဲ့ ရုပ်ထွက်မျက်နှာပြင်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ နောက်ကျောဘက်မှာ 13MP ရှိ Wide ကင်မရာ၊ 8 MP ရှိ Ultrawide ကင်မရာ၊ 2MP ရှိ Macro ကင်မရာနဲ့ 2MP Depth ကင်မရာ စုစုပေါင်း ကင်မရာလေးလုံးကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ HDR နဲ့ Panorama မြင်ကွင်းကျယ်ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ယူနိုင်သလို Depth ကင်မရာကိုအသုံးပြုပြီး အနီးကပ်ရိုက်ချက်တွေကိုလည်း ကြည်ကြည်လင်လင် ရိုက်ကူးနိုင်မှာပါ။ ရှေ့ဘက်မှာတော့ 8MP ရှိ Selfie (Wide) ကင်မရာကို မျက်နှာပြင်ထဲမှာ ထည့်သွင်းပေးထားပြီး လှပတဲ့ Selfie ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးနိုင်သလို ကြည်လင်တဲ့ရုပ်ထွက်နဲ့ Video Call ခေါ်ဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်ဆန်သွက်လက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရရှိစေဖို့ MediaTek Helio P35 Chipset ကို အသုံးပြုထားပြီး 2.35GHz အမြန်နှုန်းရှိတဲ့ Octa-core CPU ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ PowerVR GE8320 ဂရပ်ဖစ်ကတ်နဲ့ RAM 4GB ကို တွဲဖက်ပေးထားတာကြောင့် Apps တွေကို အဆင်ပြေပြေ တပြိုင်နက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဂိမ်းကစားဖို့လည်း အဆင်ပြေစေမှာပါ။ ဘတ္ထရီအတွက် 5,000 mAh ပမာဏအထိရှိတဲ့ ဘတ္ထရီကို တပ်ဆင်ထားတာကြောင့် အချိန်ပိုမိုကြာမြင့်စွာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး USB Type-C Port နဲ့အားသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Internal Storage - 64GB ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေတာတွေကို လုံလုံလောက်လောက် သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ OS အဖြစ် နောက်ဆုံးပေါ် Android 10 OS နဲ့ မောင်းနှင်ပေးမှာဖြစ်ပြီး Funtouch 10.0 (User Interface) နဲ့ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လှပတဲ့ 3D ရောင်ပြေးဒီဇိုင်းပုံစံနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး အဖြူရောင်နှင့် အနက်ရောင် တို့ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ အာမခံသက်တမ်းတစ်နှစ်ပေးထားပါတယ်။
6.47 Months i View Display
Because the small projector has been installed on the front page of 6.47, the ability to offer an engaging perspective. The screen-to-body ratio is 90.7% and the aspect ratio is set to achieve 19.5:9and 1560x720 HD + resolution.We are dedicated to achieving the perfect interface of the interface of the Leica Media, as it is dedicated to perfection. In addition, the Eye Protection mode helps to keep the brightness of the display from getting too light and when it is in use, it will also reduce the exposure.
Bright 3D Colors too beautiful art
The Y30's body featuresarange of features, from the bottom to the individual pieces, and is made to fit in. The 3D dots are created to be fun and are made into small panels on the upper panels.The Emerald Black edition combines dark colors with beautiful vegan looks. Dazzle Blue is as beautiful asabright red lighthouse. In addition, Moonstone White can stimulate and slow downapearl king.
The 5000mAh battery has been able to eliminate the need to help your Y30 use more and more. By the time the power comes in, the Type-C is fully charged with power, and atarate it has never experienced before.The Y30 is able to play the Game 1 online for nine hours, with just 137.09 hours of listening to the song 2.
The performance of the four-part Y30 is quite unique, and it hasalong tradition. 13MP camera The 8MP High Definition Camera, The 2MP Super-Macro camera and the 2MP Bokeh camera will each customize each of their functions, and will be able to getavariety of programmable images with each slice of your face.
Super Macro is cool
The 2MP Super Macro camera can help you stream around 4cm inabeautiful, small world, up to the size ofatiny house.
Multi-Turbo 3.0 is leveraging the market's first-class VPG (vivo Process Guardian) technology and incorporates AI Turbo to work with Center Turbo and the talented designers. It is possible to detect non-linear errors that can be attributed to the application of the software.